Arakan Eagle: 2009
Boh Mong King (ဗိုလ်မင်းထောင် မင်းကြီး)
"We welcome guests, but don't want Bandarban to become crowded or polluted like Rangamati. We don't want to lose our culture nor see it consigned toamuseum."
- Raja King Aung Shwe Prue
Posted by Eagle info dash at 17:32 No comments:
Posted by Eagle info dash at 17:11 No comments:
List Kings of Arakan Kingdom
Posted by Eagle info dash at 16:52 No comments:
ပန်းညည်း ( အသျှင်- ၆)
Posted by Eagle info dash at 18:48 1 comment:
*ချောင်းဖြား...သောင်ယံ...သဲ မှူန်ဆန် ...၍
Posted by Eagle info dash at 15:08 No comments:
Posted by Eagle info dash at 15:03 No comments:
ချမ်းဆောင်း- နွီကာလ၊ တပေါင်းမင်းလွင်၊
ရွက်ကျင် တောင်လီ ထ- က။ ။
-ကြွီကျ- ပင်တကာ၊ ဖူးရစ်နုဆောင်၊ သီကုံးယောင်သို့၊
ခြောက်ရောင် စိမ်းရွှေဖြာ လျှက် ။ ။
ရူချေသော်- လွှမ်းဖွယ်တိ၊ သီးပွင့်တကာ၊
ပင်တိုင်းမှာလျှင်၊ ချိန်ခါ အညီညှိ သို့ ။ ။
-ကြည့်သရွေ. လွမ်းအောင်ဖန်၊ ရွက်ကျင်ဆွတ်ခြီ၊
တပေါင်းလီ- တိုက်ပြန်က ။
ကုံးသီဟန်- ပုံမခြား၊ ညှာစိမ်းရွှီတူ၊ ငွေတူ ပန်းကြွက်နားတည့် ။ ။
-ဒေါန - ချပ်တရာ၊ အဝေယာ ကြက်ရုံး ၊
ဂမုန်းစံကား ၊ ဆပ်သွား - ဇီဇ၀ါ နယ့် ။ ။
နော်ဇာသည် - ဇော်ဂျီပန်း ၊ ပုန်းညက် -ကြန်.ဇာ ၊
ဇလတ္တာ ကေ ၊ ခတ္တာ ပန်းခေါက်ရမ်းနယ့် ။ ။
ပြိုင်းပန်းမြင့် - တ၀ီဝီလူ ၊ လီညှင်း ဆွတ်ယူ ၊ တောလုံး- မွှီးနံကြူလျက်။ ။
မဥူသည်ပန်းထင်ရှား၊ ကွမ်းဘဲ - ဆင်ဝီ ၊ ငုံးရွှီ- ပန်းချရားနယ့်။ ။
ကုံးသီထား- ပုံအတူ၊ ဟေမန်ကုန်ပြောင်း၊
လတပေါင်းသည်၊ ချမ်းဆောင်းအကုန်ယူ၍ ။ ။
သာမြို့ဟူ- ကန်ကော်ပန်း ၊ ပွင့်မျိုးစုံကေ ၊ ဂိန်မန်တပေါင်းယွန်းမှာ။ ။
စွန်းစွန်းဆွဆ်ယူ၊ ဆယ်ချေင်းထိပ်မိုး၊ ဘုန်းလျှံဖြိုးကို။ ရှိခိုးတောင်းပန်တင်၏လေ။ ။
Posted by Eagle info dash at 19:55 No comments:
Posted by Eagle info dash at 22:42 1 comment: